UKadodia uhlalele ethembeni lokuthi iMaritzburg izobuyisa umgqigqo omuhle | News24
UKadodia uhlalele ethembeni lokuthi iMaritzburg izobuyisa umgqigqo omuhle
Cape Town - USihlalo weMaritzburg United uFarook Kadodia ugcwele ukuzethemba ngokuthi umqeqeshi wale kilabhu uFadlu Davids uzokwazi ukuyibuyisela emgqigqweni omuhle.
ITeam of Choice ivule isizini ngegiya eliphezulu inqoba imidlalo emithathu yokuqala, okubalwa nokushaya iMamelodi Sundowns kowe-MTN8.
Kepha kubukeka lehle kakhulu izinga manje njengoba le kilabhu isigijime imidlalo engu-9 ingawini, nokuholele ekutheni yehle iyohlala kunombolo 13 kwi-log, yaphinde yakhishwa emiqhudelwaneni emibili okuyi-MTN8 neTelkom Knockout.
UKadodia, nokho, wehlise amaphaphu wazwakalisa ukuthi uyameseka uDavids.
OLUNYE UDABA: Elase-KZN ligcine limqashe ngokugcwele obebambe esokuqeqesha
"Kunezingqinamba ezifika nenhlobo yebhola elimnandi esifuna ukulidlala siyikilabhu," kusho uKadodia.
"Ngicabanga ukuthi amanye amakilabhu ayesibhekile ku-MTN8, awuhlaziya kahle umdlalo wethu, ase esebenzela phezu kokuthi azoyimisa kanjani iMaritzburg. Amakilabhu apaka ibhasi uma edlala nathi noma ahlasele kuphela.
"Asikho isidingo sokuthi sitatazele. Siyakuqonda ukuthi uFadlu ungumqeqeshi omusha. Wenza umsebenzi oncomekayo ngesizini eyedlule, waphinde wayivula kahle. Ngiyakholelwa kakhulu ekutheni usahamba kahle.
"Anginakungabaza ukuthi abadlali basamhlonipha uFadlu futhi nginethemba lokuthi iqembu lizobuyela emgqigqweni omuhle," esho.
Uphethe ngokuthi kumele beze namaqhinga amasha.